Yekutanga Vhura Sosi RISC-V Inouya kuna Arduino | Linux Vakapindwa muropa
Isu tato taura pane dzimwe nguva nezve yemahara Hardware uye opencores.org chirongwa, uko kune akawanda akavhurwa sosi chip mapurojekiti, kusanganisira anonakidza microprocessors senge OpenSPARC, nezvimwe. Zvakanaka ikozvino kambani SiFive yakagadzira Arduino inoenderana yekuvandudza bhodhi iyo inoshandisa imwe yeaya machipisi. Izvo zvinoita kuti Hardware iwedzere kuvhurika uye mamwe maitiro eiyo microprocessor iyo inoraira iyo inogona kuzivikanwa.
Ndiro mukongiri inonzi HiFive1, uye chinhu chayo chikuru, kana chinonyanya kushamisa, sezvo paine akawanda akafanana kana Arduino-anoenderana mabhodhi, ndizvo chaizvo izvi, izvo zvekusanganisa MCU kana microcontroller unit ine yakavhurika sosi ISA RISC-V-based CPU. Pasina kupokana nhau huru, uye kune avo vasati vaziva rudzi urwu rwepurojekiti, ndinokukurudzira kuti uongorore pane opencores.org webhusaiti, kwaunowana zvese kubva kuma microprocessors, ma microcontroller, ma MMUs, FPUs, ALUs, ndangariro, nezvimwe, mapurojekiti ese akavhurika pasi pemarezinesi akasiyana siyana.
Zvinotaridza kuti ndiro iyi inotengesa ingangoita $ 79 izvozvi uye inodonha kusvika kumadhora makumi mashanu nemapfumbamwe munaNdira 59. Chikonzero chinotyaira chisikwa ichi kuziva kwevaongorori, vashandisi nevadzidzi kudzidza zvakawanda nezvezvakanaka RISC-V kuvaka. Chii chiri kukosha kwezviputi izvi, hazvo, zvakapusa, zvinoitika senge muzuva rayo neMIPO kana izvozvi nemaARM, ivo vanofarira zvikuru vanogadzira uye zvinoita sekunge RISC-V iri kunyanya kumutsa kufarira kwemapoka mazhinji nguva pfupi yadarika.
RISC neMIPI mapurani maviri anonzwika akajairika kune avo vanoziva nyika ino, nekuti zvakagadzirwa nevanhu vaviri vanoziva zvakanyanya nezvezvivakwa zvemakomputa: David Patterson (University of California) uye John hennessy (Yunivhesiti yeStanford). Zvakanaka, ikozvino unogona kudzidza zvimwe nekutenda kune iyo E310 SoC yebhodhi iri ine E31 CorePlex CPU, 32-bit uye 32Mhz RV320IMAC musimboti ine 1.61DMIPs / Mhz inogadzirwa nehofori TMSC.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Yekutanga yakavhurwa sosi RISC-V inouya kuArduino
Arch Linux 2016.12.01 Mufananidzo Iye Zvino Wawanikwa